Gisella Cardia - Aza miavona - Countdown amin'ny fanjakana
Gisella Cardia - Aza mianina
Izahay dia	Gisella Cardia	tamin'ny 9 jona 2020:
Ry zanako malala, misaotra anao nivory teto am-bavaka ary tamin'ny fihainoanao ny antsoko ao am-ponareo. Ry zanako, tsarovy hatrany ny tenin'i Jesosy zanako: na iza na iza no enjehina amin'ny anarako dia hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Anaka, anaka, inona no atahoranao? Fantaro fa hiaraka aminao foana aho. Hotsaraina ianao amin'izay safidy rehetra ataonao. Aza mitongilana: manandrata ny fitiavan'Andriamanitra tokana, izay nanao ny lanitra sy ny tany, ary izay hanavao ny tany sy ny ho avy tsy ho ela, mba hiverenan'ny faharatsiana izay nivoahany avy tany amin'ny halalin'ny tany. Anaka, jereo ny zava-mitranga eto an-tany: ny tanàna tondra-drano be, ny horohoron-tany, ary hihamafy hatrany hatrany. Ry zanaka, miovaova haingana, sao dia tsy hahatsapa fanaintainana ianareo mandritra ny fampitandremana fa fitiavana sy fandriampahalemana. Hohavaozina miaraka amin'ny andiany vitsy sisa ny Fiangonana, mahatoky an'i Jesosy sy ny tenin'ny Raiko. Mivavaha ho an'i Amerika sy Mexico. Mivavaha ho an'ireo mpisorona masina rehetra izay enjehina sy mahatoky. Ankehitriny dia apetrako aminao miaraka amin'ny tsodrano ara-piterahana, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
← Fr. Scanlan - Faminaniana ny taona 1976
Pedro Regis - Ny marina sy ny lainga →